4 novambra 1936 - 4 novambra 2019 : feno 83 taona katroka anio ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka. Manamboninahitra mitondra ny galona «Amiral » grady ambony indrindra eo anivon’ny Tafika an-dranomasina izy.
Filoha mpanorina antoko Arema i Didier Ratsiraka. Nitondra an’i Madagasikara teo anelanelan’ny 4 janoary 1976 hatramin’ny 27 martsa 1993. Niverina teo amin’ny fitondrana indray ny 9 febroary 1997 hatramin’ny 6 may 2002.
Nirotsaka hofidiana filoham-pirenena indray ny taona 2018, ary nihintsana tamin’ny fihodinana voalohany.
Tamin'ny fotoana nitondrany no nahazahoan'i Madagasikara, teo anivon'ny Firenena mikambana, ireo nosy malagasy izay mbola bodoan'i Frantsay hatramin'izao.